ကှမျးစားသူမြား ကိုဗဈကူးစကျနိုငျခွေ ပိုမြားသဖွငျ့ အထူး သတိပွုရနျ လိုအပျ – 7Day Update News
ကှမျးစားသူမြား ကိုဗဈကူးစကျနိုငျခွေ ပိုမြားသဖွငျ့ အထူး သတိပွုရနျ လိုအပျ
ကှမျးစားသုံးသူမြားတှငျ COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျနိုငျ ခွပေိုမြားသဖွငျ့ သတိပွုရနျလို အပျကွောငျး ဆရာဝနျမြားက ပွောပါတယျ။
“ကှမျးယာစားတဲ့အတှကျ ကွောငျ့ ကိုဗဈကို ပိုကူးစကျနိုငျပါ တယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကှမျး တံတှေးထှေးလို့ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျးပဲ ကိုဗဈဟာ အသကျရှူလမျးကွောငျးမှာ ဖွဈ တယျ။ ပါးစပျ၊ နှာခေါငျးကထှကျ တဲ့ အမှုနျအမှား၊ အရညျတှထေဲမှာ ရှိတယျ။ ဒီကနထှေကျရငျ ကူးစကျနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ခြောငျးဆိုးရငျ အုပျဆိုးဖို့၊ နှာခေါငျးစညျးတပျဖို့ ပွောကွားရတယျ။ စကားပွောရငျတောငျ ကူးနိုငျတယျ။ သီခငျြးဆိုရငျ ကူးနိုငျတယျ။ တံတှေးကနေ ကူးနိုငျတဲ့အတှကျ ကွောငျ့” ဟု ကိုဗဈအကွောငျး သိကောငျးစရာ အမေးအဖွေ အစီ အစဉျတှငျ မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျ အသငျး(ဗဟို)ဥက်ကဋ်ဌ ပါမောက်ခ ဒေါကျတာ ထငျအောငျစောက ပွောပါတယျ။
ဆေးလိပျနှငျ့ ကှမျးစားသုံးသူမြားတှငျ ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျနိုငျခွသေညျ သာမနျလူထကျ တဈဆခှဲခနျ့ ပိုမြားနိုငျကွောငျး ပွညျသူ့ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညှနျ ကွားရေးမှူးခြုပျ ဒေါကျတာကြျော ကံကောငျး (မကူးစကျ)က ဆိုပါတယျ။
“ကိုဗဈကူးစကျနိုငျခွရှေိတဲ့ သူတှကေတော့ သူတို့ရဲ့ အပွုအမူတှပေေါ့နျော။ အပွုအမူတှဆေိုတာက ကှမျးစားတာ၊ ဆေးလိပျသောကျတာ။ အဲဒါမြိုးသမားတှကေ Mask လညျးမတပျဘူးပေါ့ နျော။ ကှမျးစားမယျဆိုလညျး နှာခေါငျးစညျးမတပျဘဲ ဟိုကိုငျလိုကျ၊ ဒီကိုငျလိုကျ လကျနဲ့၊ မကျြနှာနဲ့ ထိတှတေဲ့ အကွိမျမြားတယျ။ ဆေးလိပျတို့၊ ဘာတို့ ကိုငျတာမြိုးတှပေေါ့။ ကူးစကျနိုငျခွမြေားတာ ပေါ့’’ဟု ၎င်းငျးက ပွောပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျ ကိုဗဈကာလတှငျး ရောဂါကူးစကျမှုကငျးဝေးစရေနျ ကှမျးတံတှေးထှေးသူမြားအား ဒဏျငှရေိုကျကွောငျး၊ ထို့အပွငျ အနောကျနိုငျငံမြားတှငျလညျး ဘောလုံးပှဲမြား၌ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမြားက အားကစားသမားမြားကို တံတှေးထှေးခွငျးအား တား မွဈထားသညျ့ သာဓကမြားရှိ ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
“အိန်ဒိယနိုငျငံမှာဆိုလညျး ကိုဗဈကူးစကျမှာစိုးလို့ ကှမျးတံ တှေးထှေးကွသူမြားသညျ Mask မတပျသော သူမြားနှငျ့ တူတယျ ဆိုပွီး ဒဏျငှဆေောငျရမယျလို့ဆို ပါတယျ။ ဆိုတော့ ပညာပေးလုပျ ငနျးတှရှေိတယျ။ တားမွဈနတေဲ့ လုပျငနျး၊ ဒဏျရိုကျနတေဲ့လုပျငနျး တှလေညျး ရှိတယျ။ ကြှနျတျော တော့ အရေးကွီးတယျထငျပါ တယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံလညျးပဲ ကိုဗဈကာကှယျထိနျးခြုပျရေးလုပျ ငနျးတှမှော ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ မကနျြခဲ့အောငျ လုပျဖို့သငျ့တယျ လို့ ပွောခငျြပါတယျ’’ ဟု ပါမောက်ခဒေါကျတာထငျအောငျစောက ပွောပါတယျ။
ကွမ်းစားသူများ ကိုဗစ်ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုများသဖြင့် အထူး သတိပြုရန် လိုအပ်
ကွမ်းစားသုံးသူများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်နိုင် ခြေပိုများသဖြင့် သတိပြုရန်လို အပ်ကြောင်း ဆရာဝန်များက ပြောပါတယ်။
“ကွမ်းယာစားတဲ့အတွက် ကြောင့် ကိုဗစ်ကို ပိုကူးစက်နိုင်ပါ တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွမ်း တံတွေးထွေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုဗစ်ဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ ဖြစ် တယ်။ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းကထွက် တဲ့ အမှုန်အမွှား၊ အရည်တွေထဲမှာ ရှိတယ်။ ဒီကနေထွက်ရင် ကူးစက်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ချောင်းဆိုးရင် အုပ်ဆိုးဖို့၊ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဖို့ ပြောကြားရတယ်။ စကားပြောရင်တောင် ကူးနိုင်တယ်။ သီချင်းဆိုရင် ကူးနိုင်တယ်။ တံတွေးကနေ ကူးနိုင်တဲ့အတွက် ကြောင့်” ဟု ကိုဗစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေးအဖြေ အစီ အစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန် အသင်း(ဗဟို)ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ထင်အောင်စောက ပြောပါတယ်။
ဆေးလိပ်နှင့် ကွမ်းစားသုံးသူများတွင် ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြေသည် သာမန်လူထက် တစ်ဆခွဲခန့် ပိုများနိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော် ကံကောင်း (မကူးစက်)က ဆိုပါတယ်။
“ကိုဗစ်ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ သူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေပေါ့နော်။ အပြုအမူတွေဆိုတာက ကွမ်းစားတာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ။ အဲဒါမျိုးသမားတွေက Mask လည်းမတပ်ဘူးပေါ့ နော်။ ကွမ်းစားမယ်ဆိုလည်း နှာခေါင်းစည်းမတပ်ဘဲ ဟိုကိုင်လိုက်၊ ဒီကိုင်လိုက် လက်နဲ့၊ မျက်နှာနဲ့ ထိတွေ့တဲ့ အကြိမ်များတယ်။ ဆေးလိပ်တို့၊ ဘာတို့ ကိုင်တာမျိုးတွေပေါ့။ ကူးစက်နိုင်ခြေများတာ ပေါ့’’ဟု ၎င်းက ပြောပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကာလတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုကင်းဝေးစေရန် ကွမ်းတံတွေးထွေးသူများအား ဒဏ်ငွေရိုက်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အနောက်နိုင်ငံများတွင်လည်း ဘောလုံးပွဲများ၌ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်များက အားကစားသမားများကို တံတွေးထွေးခြင်းအား တား မြစ်ထားသည့် သာဓကများရှိ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
“အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလည်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှာစိုးလို့ ကွမ်းတံ တွေးထွေးကြသူများသည် Mask မတပ်သော သူများနှင့် တူတယ် ဆိုပြီး ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ်လို့ဆို ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပညာပေးလုပ် ငန်းတွေရှိတယ်။ တားမြစ်နေတဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဒဏ်ရိုက်နေတဲ့လုပ်ငန်း တွေလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော် တော့ အရေးကြီးတယ်ထင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းပဲ ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ် ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မကျန်ခဲ့အောင် လုပ်ဖို့သင့်တယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်’’ ဟု ပါမောက္ခဒေါက်တာထင်အောင်စောက ပြောပါတယ်။
??? ???????????? မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဆုအား စိနျချေါနိုငျသညျ့ကစားသမားမြားအားထုတျပွနျရာတှငျ အောငျလအနျဆနျ ပါဝငျ
သာသနာအတှကျ ကပျြသိနျး(၁၁၀၀)ကြျော လှုဒါနျးလိုကျတဲ့ EFD ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုငျးမြိုးဝငျး